तपाईंको साथीको खुशी कसरी बढाउने र तिनीहरूलाई तपाईंको आदी बनाउने - स्यान्टे प्लस म्याग - टेली रिले
तपाईंको साथीको खुशी कसरी बढाउने र तिनीहरूलाई तपाईंको आदी बनाउने - स्यान्टे प्लस म्याग
राम्रो सेक्सि Having गर्दा तपाईंको पार्टनरको कल्पनाहरू अन्वेषण गर्ने बेलामा उत्साह बढाउने क्षमतामा निर्भर हुन्छ। जब यो यौनिकता को कुरा आउँछ, यो कसरी जान्ने भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको मान्छे खुशी लिन्छन् र लि an्ग प्राप्त गर्न सक्दछ जबसम्म ऊ एक संभोग गर्दैन।
कसरी एक व्यक्ति परम खुशी हासिल गर्न सक्छन्?
प्रवेश, हस्तमैथुन वा ओरल सेक्सको समयमा, एक मानिस यौन उत्तेजित हुन सक्छ जब ऊ जगायो। द्वारा परिभाषित स्वास्थ्य पासपोर्ट, पुरुष ओर्गास्म योनी वा क्लीटोरल ओर्गेज्मको समान तरिकामा देखा पर्न सक्दछ। यो यौन उत्तेजनाको चरणको चरम समयमा हुन्छ। पुरुषहरूको लागि, यो इरोजेनस जोनहरू र / वा यौन अंगहरूको उत्तेजना पछि हुन्छ। लि ,्ग, अण्डकोष, गुद्द्वार शरीर रचना को सबै भाग हो कि यौन उत्तेजना पैदा गर्न सक्छ। यदि पुरुषहरूमा यो वीर्यको स्राव द्वारा प्रकट हुन्छ, अर्थात् स्खलन, यो सधैं केस हुँदैन। यो छ सेकेन्डको औसत तीव्र र कडा मांसपेशी संकुचन द्वारा विशेषता हो। महिला ओर्गास्म जस्तै, यो एक्स्टेसी उस्तै शारीरिक अभिव्यक्तिको द्वारा विशेषता हो छिटो सास फेर्न र मुटुको धड्कन। एक संभोगले पनि हार्मोनहरू र तनाव कम गर्ने अणुहरू जारी गर्दछ जस्तै ऑक्सीटोसिन, जो संलग्नसँग जोडिएको छ। कहिलेकाँही, केहि पुरुषहरू नीरस महसुस गर्न सक्दछन् डुभेट अन्तर्गत पाएको यो खुशी पछि। यद्यपि महिलाहरु जस्तै तिनीहरूले एक संभोग संग नक्कल गर्न सक्छन्।
एक erogenous क्षेत्र जस्तै उत्तेजना पछि लिंग, अण्डकोष वा गुद्द्वार पछि एक मानिस आउन सक्छ। स्रोत: Ohmymag
के स्खलन ऑर्गेज्मको पर्यायवाची छ?
यदि हामी गल्तिले सोच्छौं कि खुशीको अनुभूति स्खलनमा प्रकट हुन्छ, यो केवल केही पुरुषहरूको लागि हो। वास्तविकतामा, शुक्राणुको निकासी शरीरको शारीरिक शल्यक्रियाहरू मध्ये एक हो हृदयको गतिको प्रवेग जस्तै जुन ओर्गास्मिक वृद्धि पछि पनीको विशेषता गर्दछ। जे होस्, स्खलन सँधै उत्तरार्धसँग जोडिएको हुँदैन जुन दुबै भौतिक हो तर मस्तिष्क पक्ष पनि हो। तपाईं बुझ्नुहुनेछ, यो एक मानिस को लागी उत्तेजना बिना एक संभोग गर्न को लागी सम्भव छ। यसलाई स्खलन भनिन्छ जुन समावेश गर्दछ pubococcygeal मांसपेशी करार जब तपाईंलाई लाग्छ तपाईं ejaculate मा जाँदै हुनुहुन्छ क्रमशः वीर्यको प्रवाहलाई कायम राख्न। यो एक यस्तो प्रविधि हो जुन तपाईंलाई तपाईंको इरेक्शनलाई ध्यानमा राख्दै धेरै orgasms लिन अनुमति दिन्छ। एक व्याख्या जसले पुरुषहरूको संयन्त्रमा प्राप्त प्राप्त विचारहरूलाई विघटन गर्दछ जब उनीहरू खुशी अनुभव गर्ने प्रक्रियामा हुन्छन्।
तपाइँको पार्टनरको खुशी कसरी बढाउने?
एक मानिस अधिकतम रमाईलो महसुस गर्न को लागी, यो सबै सुन्ने संग शुरू हुन्छ। यो केहि महिलाहरूको लागि महत्वपूर्ण छ जो आफ्नो पार्टनरलाई यौन सन्तुष्टि प्रदान गर्न गाह्रो महसुस गर्दछन् आफ्ना इच्छाहरूप्रति सजग बन्न र कुन कुराले उनीहरूलाई राम्रो महसुस गराउँदछ। आपसी कल्पनाहरू को बारे मा कुराकानी यौन जीवन को मसला को क्रम मा हुन सक्छ। केही पुरुषहरू ईरोजेनस जोनहरू हुन्छन् जुन कुराहरु वा शारीरिक प्रतिक्रियाहरू कसरी पहिचान गर्ने भनेर जानेर महत्वपूर्ण हुन्छन्। यो फोरप्लेको समयमा उत्तेजित गर्न महत्वपूर्ण छ कि फिला वा निपल्स हुन सक्छ। यी चिन्ताहरू पछि, योनी वा गुदा प्रवेश यौन कार्यको पूजा गर्न सकिन्छ। "रोक्नुहोस् र जानुहोस्" प्रविधि कडा उत्तेजनाको क्षणमा रोकिनु हो र पुनःसुरु गर्नु जुन दुबैमा रमाइलो लाग्न सक्छ जुन अझ बढी तीव्र orgasms को लागि अनुमति दिन्छ। यो वृद्धिले एक्स्टसी बिस्तारै प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं क्लिटोरल हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई गहिरा प्रवेशको समयमा क्लाइटरल उत्तेजनाको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। यो Andromache स्थिति को दौरान संभव छ जहाँ तपाईं आफ्नो पार्टनर सामना गर्दै हुनुहुन्छ। केहि पुरुषहरू पनि गु anal्गो क्षेत्रमा रिम्मि and र स्ट्रोक गर्न संवेदनशील हुन सक्छ जसले तिनीहरूलाई प्रोस्टेट ओर्गास्म दिन्छ। यो सबै कुराको बारेमा हो जुन तपाइँलाई कुनै ट्याबूहरू बिना मनपर्दछ। संचार कठिनाइहरूको मामलामा, एक सेक्स थेरापिस्टसँग अपोइन्टमेन्टले तपाईंलाई यो यौन असन्तुष्टि कहाँबाट आउँदछ भनेर राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ।
स्टप एण्ड गो प्रविधिको खुशी पुरुष र महिला दुबै को लागि अन्तिम बनाउन सक्छ। स्रोत: ला लिब्रे
के यो सम्भव छ कि उसले बिना घुसाउने शारीरिक आनन्द प्राप्त गर्यो?
प्रवेश पूर्ण यौन जीवनको कुनै ग्यारेन्टी छैन। यौन आनन्दको लागि उपयुक्त वातावरण जानको लागि आवश्यक छ तर यौन तनाव बढाउनको लागि। लिंग एक erogenous क्षेत्र हो, तर यो आफ्नो ध्यान को आफ्नो मनपर्ने को घाउ स्थान मा ध्यान केन्द्रित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। अण्डकोष वा नितम्ब शरीरको क्षेत्र हुनसक्छन् कि क्यासलाई ग्रहणयोग्य हुन्छ। किन पहिले मसाज प्रयोग गर्नुभएन जसले तपाईंलाई आफ्नो पार्टनरको प्रत्येक रिफ्लेक्सलाई आफ्नो शरीर राम्रोसँग बुझ्नको लागि बुझ्दछ? हस्तमैथुन पनि उहाँलाई मन पर्ने आन्दोलनहरू र तालहरू बुझ्नको लागि प्राथमिक विकल्प हुन सक्छ। संभोग गर्न प्रतिरोधी रहेको समयको अवधिमा तपाईको पार्टनरले महसुस गरिरहेको तनावलाई बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। यो सम्भव छ कि ऊसँग प्रदर्शन चिन्ता छ वा त्यो तपाईं जस्तो, ऊ नराम्रो प्रेमी बन्न डराउँछ।
तपाइँको पार्टनरलाई कसरी एक आवाज दिई खुशी पुर्‍याउने?
कनिनिलिंगसको यो बराबर जुन महिलाले विशेष गरी प्रशंसा गर्न सक्दछ जननांगहरूको मौखिक उत्तेजना मार्फत खुशीलाई बढावा दिन सक्छन् यस अवस्थामा लि .्ग। त्यहाँ पनि, यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ कि सम्भावित रूपमा तपाईंको साथीलाई प्रयोगको आनन्दको स्रोत के हो। जिब्रोले गुदगुदा, चुम्बन, चूसना, चाटना सबै कार्यहरू हुन् जुन तपाई चालको भिन्नताको साथ स्खलन ट्रिगर गर्न कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यो मौखिक क्यारलाई एक हस्तमैथुनको साथ पनि गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं गति परिवर्तन गर्नुहुनेछ। लिंग को सबैभन्दा संवेदनशील हिस्सा लि pen्ग माथिको ग्लानहरु हो, एक क्षेत्र जसको उत्तेजना खुशी प्रदान गर्दछ। तपाइँको दाहिने हातको प्रयोग गरेर, तपाइँ एकै साथ अण्डकोष स्ट्रोक गर्न सक्नुहुन्छ। एक कामुक आनन्द जुन तपाइँको पार्टनरले कहिल्यै थाक्ने छैन। यदि तपाईंलाई यो प्रारम्भिक मनपर्दैन भने, तपाईं केवल यो स्ट्रोक गरेर लिंग उत्तेजित गर्न सक्नुहुनेछ।
सेक्स अघि खुशी कसरी बढाउने?
उनलाई अन्तिम आनन्दको यी भावनाहरू महसुस गर्नु अघि, यो महत्वपूर्ण छ कि पुरुषहरू जस्तै महिलाहरूको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु। मैनबत्तीको प्रकाश, डिमिट लाइटिंग, सेक्सी पोशाक र एउटा गन्ध सुगन्धले डिनर भनेको ती चीजहरू हुन् जसले कठिनाई पाएकाहरूलाई खुशीको आनन्द लिन मद्दत पुर्याउँदछ। यस अदालतले तपाईंको सबै कल्पनाहरूको अन्वेषण गर्न नीरसता तोडनेछ। दिन को समयमा पठाइएको शरारती सन्देशहरूले अधिकतम खुशीको लागि यौन तनाव बढाउन पनि मद्दत गर्दछ जब तपाईं अन्ततः एक अर्कालाई देख्नुहुन्छ। यो साहसी सानो खेल तपाइँ महासियर कामसुत्र स्थिति लिन को लागी तपाइँ लिन चाहानुहुन्छ। यी पहलहरूले तपाईंको दैनिक जीवनमा क्रान्ति ल्याउँदछ किनभने उनीहरूले नयाँ जीवनलाई सेक्समा सास फेर्छन्। आफैंलाई पुन: सार्न कहिल्यै हिचकिचाउनुहोस् किनकि सेन्शुअल ब्रह्माण्ड विशाल छ र केवल तपाईले त्यसलाई के दिनु हुन्छ सोध्नुहुन्छ!
कसरी महिला आनन्दको गति बढाउने?
यदि पुरुषको लागि कोइटस भन्दा पहिले वा पछि रमाउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ भने, एक परिपूर्ण यौनिकता महिलाको सन्तुष्टिको चिन्ता बिना नै हुँदैन। यसको लागि, लुब्रिकेशनलाई अनुमति दिन प्रिलिमिनेरीहरू, क्यापिटलमा स्किप नगर्नुहोस्। महिलाले आफ्नो खुशी बढाउनको लागि पर्याप्त जागृत भएको महसुस गर्नुपर्छ। उत्तरार्द्धले आफ्नो पार्टनरलाई उनको इरोजेनस जोनहरू जो प्रत्येकको हिसाबले फरक पर्दछ मार्गदर्शन गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। केहि निपल्स वा क्लिटोरिसलाई छुने बेलामा धेरै संवेदनशील हुन्छन् जुन अ ner्गमा नर्भ अन्डाहरूको उल्लेखनीय संख्याको साथ अंग हो। यो बिस्तारै योनीको उत्तेजना बढाउँदछ औ योभाको बिरूद्ध लिंगलाई जोडेर। यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने पार्टनरले बुझ्नु पर्छ कामुक वा विपरित वायलर उत्तेजनामा। अन्तमा, हामीले सेरेब्रल आयाम बिर्सनु हुँदैन जुन महिलाको यौनिकताको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यौनको समयमा कुरा गर्नाले महिलालाई बढी जगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। तिनीहरूको शरीर र उनीहरूले तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्ने तरिकाको बधाई दिनुहोस्, यसले उनीहरूको खुशी र बदलामा तपाईंलाई कम गर्ने तिनीहरूको इच्छालाई गुणा गर्दछ।
पूरा गर्ने कामुकता पनि महिलाको ओर्गास्ममा समावेश हुनुपर्दछ। स्रोत: हफिंगटन पोष्ट
यौन स्थिति फरक फरक
के तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं आफ्नो पार्टनर एक नयाँ लिंग स्थिति मार्फत स्क्वर्टिंग महिला हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ? लि -्ग को जी-स्पटमा टिल्टि ,्ग, योनीको पर्खालको कुनै न कुनै क्षेत्र, तपाइँले यस क्षेत्रलाई उत्तेजित गर्ने बेला कहिल्यै पनि संभोग नगर्ने महिलालाई खुशी दिन अनुमति दिनुहुन्छ। तीनिहरु क्लिटोरस स्ट्रोक गर्न ग्रहण योग्य पनि हुन सक्छ तपाईले नयाँ स्थिति प्रयोग गर्दा। डग्गी शैली पनि बढि प्रवेशको लागि चाखलाग्दो छ, जुन गहिरो र संवेदनाहरूलाई गुणा गर्ने छ। कमल स्थिति पनि चाखलाग्दो छ पार्टनरहरूलाई उत्तेजित गर्न किनकि यसले एक कामुक आँखा सम्पर्कलाई अनुमति दिन्छ जसले पुरुषलाई महिलाको इरोजेनस जोनहरू पहुँच गर्न अनुमति दिनेछ जसले आफैलाई ताल र कमिंग्सको गहिराई नियन्त्रण गर्न सक्दछ। ओर्गास्मस हुनु पनि महिलाको दृष्टिकोण हो। जो अक्सर बारम्बार orgasms छ अक्सर यी बानी हुन्छ।
महिलामा, सुन्नु आवश्यक छ
हिम्मत र आविष्कारबाहेक जो कामुकता पूरा गर्ने को एक महत्वपूर्ण पक्ष हो, यो एक दृष्टिकोण हुनु महत्त्वपूर्ण छ जुन प्रत्येक पार्टनरको आवश्यकता र चाहनालाई ध्यानमा राख्छ। र राम्रो कारणका लागि, त्यहाँ कुनै जादुई तरीका छैन कुनै महिलालाई पुरुषलाई खुशीको अनुभूति दिन। यो अवस्थित छ हामी घृणा गर्न सक्छौं सराहनीय caresses। सेक्सटवाईको प्रयोग सेक्सको समयमा एक भन्दा बढि टाइटलाइट गर्न सक्दछ जबकि यो अभ्यासले केही लाई पन्छाउन सक्छ। यसै कारणले गर्दा ओछ्यानमा नयाँ कुरा सुरु गर्नु अघि कुराकानी आवश्यक छ। उही भूमिका खेल्ने, वर्चस्व, कच्चा भाषाको लागि जान्छ जुन उनीहरूलाई व्यवहारमा राख्नु अघि छलफल गर्नु पर्छ। साथीलाई व्यक्त गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् खुला दिमाग भएको द्वारा इच्छा सबै भन्दा सन्तुष्ट छ र डुवेट अन्तर्गत नयाँ चीजहरू प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सबै भन्दा राम्रो तरिका हो!
यो लेख पहिलो पटक https://www.santeplusmag.com/comment-au Augment-le-plaisir-de-Votre-partenaire-et-le-rendre-acro-a-vous / मा देखा पर्‍यो
ऑस्कर-विजेता अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीले मंगलबार बताइन कि उनले अधिक रोकथाम शल्यक्रिया गरियो - भिडियो
एन्जेलिना जोलीको छोरोले ब्राड पिट - भिडियो बिरूद्ध अदालतमा गवाही दिए